श्रीमान् घर छाडेर पैसा कमाउदै- तर श्रीमती भइन् ग र्भवती, जवाफ सुनेर सबै हैरान ! – ईमेची डटकम
श्रीमान् घर छाडेर पैसा कमाउदै- तर श्रीमती भइन् ग र्भवती, जवाफ सुनेर सबै हैरान !
एजेन्सी । नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेको बिहार जगदीशपुरमा एक महिला अचा नक गर्भ वती भइन् । महिलाकी नन्द आफ्नो दाइ कोलकातामा रहेको भन्दै डिआइजीसम्म पुगिन् । गर्भ वती भएकी महिलाका श्रीमान् डेढ वर्षदेखि कोलकातामा भएका का रण महिला कसरी गर्भ वती भइन् ?
महिलाकी नन्दले तीन महिनादेखि भाउजू गर्भ वती रहेको बताइन् । ती महिलाका डेढ वर्षीया छोरी छन् । श्रीमानले कोलकातामा जागिर गरिरहेका छन् । यस्तोमा सबैलाई आश्चर्य लाग्यो ती महिला कसरी गर्भ वती भइन् ?
भारतीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार नन्द आक्रोसमा आइन् र फेरि एक पटक डिएनए टेष्टको माग गरिन् । चिकित्सकले जाँच गर्दा तीन महिना पुग्नका लागि १२ दिन कम रहेको बच्चा ग र्भमा रहेको बताए ।
नन्दले उनलाई घरबाट निकाल्न प्रयास गरिन् । श्रीमानले पनि कस्को बच्चा हो भनेर प्रश्न गरे । तर महिलाले त्यसको ठोस उत्तर दिइनन् । ती महिलालाई घरबाट निकाल्न थालेपछि उनले ग र्भमा भएको बच्चाका बारेमा आश्चर्य जनक कुरा सुनाइन् । त्यो कुराले सबै जना आश्चर्यमा परे ।
ती महिलाले आफ्नो श्रीमानको बच्चा भएको दावी गरिन् । उनले भनिन्, ‘म जहिल्यै सुतेपछि श्रीमान सपनामा आउनु हुन्थ्यो । त्यसैक्रममा मलाई उहाँले शारीरिक सम्पर्क गर्नुभयो । त्यसैकारण म गर्भ वती भएँ ।’
आश्चर्य जनक जवाफले पुलिसले थप अनुसन्धान गर्न बाध्य भयो । लामो समयपछि ती महिलासँग एक युवकले नियमित फोन सम्पर्क गरेको भेट्टियो । युवकलाई नियन्त्र णमा लिएर अनुसन्धान गर्दा त्यहीँ युवकको ग र्भ धारण गरेको फेला परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।